Zimbabwe: Tirintii codadka oo la bilaabay - BBC Somali
Zimbabwe: Tirintii codadka oo la bilaabay
1 Agoosto 2013
Tirintani codadkii guud iyo sida loo kala dhiibtey, loona kala helay, waxa la bilaabay ka dib markii shalay la soo gabagabeeyey dalka Zimbabwe codayntii guud ee dadweynaha ee lagu soo dooranayey madaxweyne iyo baarlamaan cusub.
Image caption Mugabe oo salaamaya taageerayaashiisa
Image caption Ololaha Morgan Tsangirai
Guud ahaanna waxa lagu tilmaamay in si heer sare ah loogu soo baxay codaynta doorashooyinkani oo ay ku looltamayaan madaxweynaha haatan Robert Mugabe oo u sharraxan ururkiisa Zanu-PF, iyo dhinaca kale Morgan Tsvangirai oo ah raaisal-wasaaraha haatan, hoggaaminayana ururka mucaaradka ah ee MDC.
Image caption Khariidadda Zimbabwe
Goobjoogayaasha ka socda dalalka ururka Midowga Afrika iyo kan Afrikada Koonfureed, waxay ku tilmaameen habkii codayntii u dhacday guud ahaan inuu ahaa mid ay ka muuqatay nabadgelyo iyo deganaansho. Hasse ahaatee ururka mucaaradka ah ee MDC oo ku jira looltankan ayaa ku doodaya in marka hore wax laga bedeley oo la qasay liiskii iyo magacyadii diiwaanka dadka xaqa u leh inay codaayaan, qaar badanna loo diidey oo laga celiyey goobihii ay codadkooda ka dhiiban lahaayeen. Dawladda Zimababwe marka horeba uma ogolaan goobjogayaal reer galbeed ahi inay tagaan dalkaasi, si ay ula socdaan codaynta.
Madaxweyne Mugabe oo da'diisu imika ay marayso 89 jir waxa uu ku ballanqaaday inuu aqbali doono inuu ka fadhhisto hogaanka haddii lagaga guuleysto doorashadani. Robert Mugabe waxa uu xukunka dalkaasi soo hayey 33-kii sano ee ugu danbeeyey. Doorashooyinkii kuwan ka horreeyey ee 2008, natiijooyinkii ka bacdi ayaa waxa ka dhacay qas iyo iska horimaad badan oo waxyeellooyin geystey. Kuwaasina waxay keeneen in sannaddii 2009 ay heshiis siyaasadeed wada galaan ururrada Zanu-Pf iyo MDC oo uu raiisalwasaare noqdo Morgan Tsvangira.
Natiijooyinka kama danbaysta ah waxa la filayaa in lagu dhawaaqo muddo shan cisho ah gudahooda, waxana looga baahan yahay qofka ku guuleysanaya madaxweynannimadu in uu helo in ka badan 50% codadka guud ee la ansixiyey. Haddii aanu qofna helin aqlabiyaddaasi, waxa la samayn doonaa wareeg labaad bisha September 11-da.